Saturday May 04, 2019 - 14:01:10 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Diyaarad kuwa rakaabka ah oo nooceedu ahaa Being 737 ayna saarnaayeen 143 ruux oo rakaab ah ayaa habeenimadii xalay ku dhacday wabiga Johnville ee gobolka Florida oo ka tirsan dalka Mareykanka kadib markii ay ka baxday wadadda ay diyaaradaha caga dhi
Diyaarad kuwa rakaabka ah oo nooceedu ahaa Being 737 ayna saarnaayeen 143 ruux oo rakaab ah ayaa habeenimadii xalay ku dhacday wabiga Johnville ee gobolka Florida oo ka tirsan dalka Mareykanka kadib markii ay ka baxday wadadda ay diyaaradaha caga dhigtaan ee garoonka diyaaradaha Jacksonvilla.
Diyaaradan oo ka soo duushay Guantanamo ayaa waxaa u gurmaday ciidamada gargaarka degdegga ah iyadoo laga soo badbaadiyay dhammaan dadkii saarnaa,inkastoo 27 ka mid ah rakaabka ay soo gaaren dhaawac fudud.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Diyaaradda ay si kedis ah uga baxday Garoonka, ka hor inta aysan ku dhicin Webiga lamana oga wali waxa sababay shilkan diyaaradeed.
Madaxa Boliiska ee magaalada Jacksonville ayaa sheeegay in diyaaradaasi ay si nabad ah u dul sabeyneyso biyaha dushoo,isla markaana ay ka badbaaday in ay quusto ama ay tagto gunta hoose ee biyaha.
Ciidamada ammaanka maraakiibta iyo kuwa gargaarka degdegga ah ayaa gurmad bni aadanimo u fidiyay dhibanatashii ka badbaaday shilka diyaaradaasi.
Waxaa socda baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay shilalkan diyaaradeed ee ka dhacay dalka Mareykanka, waxaana shilkan uu argagax badan ku abuuray rakaabkii diyaarada la socday.